IINGCAMANGO EZINGAMA-55 ZOCINGO LOBIYELO LWELATTICE (IMIFANEKISO KUNYE NEENTLOBO EZIDUMILEYO) - IZITIYA KUNYE NOKUHLALWA KOMHLABA
Eyona izitiya Kunye Nokuhlalwa Komhlaba Iingcamango ezingama-55 zoCingo loBiyelo lweLattice (Imifanekiso kunye neentlobo ezidumileyo)
Iingcamango ezingama-55 zoCingo loBiyelo lweLattice (Imifanekiso kunye neentlobo ezidumileyo)
Nazi iimbono zethu eziphambili zokuyila ucingo. Ucingo oluyi-lattice lunokubonelela ngasese, ukhuseleko kwaye luncede indawo yakho yangasemva ijonge ngakumbi ekumemeleni kusapho nakwizihlobo. Ngaba ujonge indlela yokufaka iyadi yakho kodwa uyithiyile imithintelo yokuziva ubiyelweyo wabucala obude? Ngaba ufuna ukhuseleko ngaphakathi kwepropathi yakho kodwa uzive ukuba ukubiyela ngohlobo lwesitayile kucace gca kumhlaba wakho? Ke iingcingo ezibiyelweyo zisenokuba zezona zilungele wena. Apha ngezantsi sabelana ngeendlela ezahlukeneyo zokubiya iiseyile kusetyenziswa izinto ezinjengomthi, isinyithi kunye nevinyl.
Iingcingo zeLattice zibonelela ngeyona nto iphambili kuzo zombini umhlaba-ukusebenza kunye nobuhle. Abanye babanini bamakhaya abanokukhetha ukubiyela iipete kuba ababoneleli bucala kakhulu ngenxa yokuphakama kwabo okufutshane, ngelixa iicingo ezi-6 zobude obude babucala zinika umbono wokuvalelwa kakhulu kuba ziphezulu kakhulu kwaye zivaliwe. Kodwa iingcingo ezibambezelayo zezona zilungileyo njengoko zibonelela ngokuvalelwa kwesimbo segadi kwipropathi yakho. (Kwiindidi ezithandwayo kunye nezitayile jonga ezethu Uyilo loBiyelo Isikhokelo sokugqibela)
Eyona ndawo ifanelekileyo yokutshata emva komtshato ngoSeptemba
Ixabiso lokubiya kweLattice
Iindidi zee-Lattice Fences
Iiphaneli zocingo lweLattice
Iiphaneli zocingo eziphezulu zeLattice
Ucingo lweVinyl Lattice
Iiphaneli zocingo zeVinyl Lattice
Kucingo olubiyele lweplastikhi
Ucingo lweLat Latice
Ucingo lweCedar Lattice
Ukubiyelwa kweLattice yentsimbi
Kucingo olubiyele ngeLatice ephezulu
Ibhendi yabucala yeLattice
Kucingo olubiyele oluMhlophe
Ucingo lweLattice DIY
Uyakha njani i-Lattice Fence
Yintoni ucingo lwelatisi? Ucingo oluyi-lattice sisakhiwo esenziwe ngomthi, isinyithi okanye enye into enezilayiti ezicekeceke ezilungiswe kumnqamlezo we-criss okanye ipateni yedayimane enezithuba phakathi. Ingasetyenziselwa ukuvala umjikelezo opheleleyo wepropathi, njengeendonga zegadi, izikrini zepatio, indawo ebiyelweyo yeveranda, i-archway, i-deck skirting okanye njengesahluli esizimeleyo. Kukwongezwa kaninzi njengesixhobo sokuhombisa imihlaba okanye njenge-trellis yegadi apho izidiliya kunye nezinye izityalo ezilandelelayo zinokunyuka xa zikhula.
Zithini izibonelelo zecingo le-lattice? Iingcingo zeLattice zithandwa kakhulu ikakhulu ngenxa yokuhombisa kwazo. Yindlela yokuhombisa kwezinye iintlobo zocingo kunye nokubonelela ngomsebenzi ophindaphindeneyo ngokubhekisele ekulimeni iintyatyambo ezihamba kunye nemidiliya elandelwayo. Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zocingo, yongeza isibheno esomeleleyo somda kunye nomdla obonakalayo kulo naliphi na ikhaya. Ingasetyenziselwa ukuchaza imida kunye nokubonelela ngasese nokuba ngabe kuvaranda, kumgangatho okanye ngasemva. Ikwasebenza ngokwahlulahlula ukufihla iimbono ezingathandekiyo ezinje ngenkqubo yomoya okanye iyunithi yokulahla inkunkuma.
Uyilo oluyingqayizivele locingo lwe-lattice lubonelela ngasese kodwa lunika ukwahlula okuncinci kubamelwane, luvumela bobabini ukuba bonwabele umbono wengingqi engqongileyo. Izilayidi ezibiyelweyo ezibiyelweyo zocingo zivumela ukukhanya kwelanga ukuba kudlule kwaye kuphucule umoya opholileyo onika indawo umoya ovulekileyo kunye nemvakalelo yomoya.
Malunga nokusetyenziswa koyilo, iyaguquguquka njengoko ibonelela ngobungakanani obahlukeneyo kunye nezitayile ezifanelekileyo iimfuno ezahlukeneyo kunye nokukhetha. Izithuba eziphakathi kweengcingo zeletisi zikwabonelela ngendawo yokuhombisa umhombiso okanye yokukhulisa izityalo ngokukhululekileyo. Iingcingo zeLattice nazo kulula ukuzifaka kwaye inokuba yintsuku ezimbini Yenza ngokwakho iprojekthi. Kulula ukusebenza nayo kwaye ayisiyomsebenzi kunye nexesha elinzima njengolunye uyilo locingo.
Zeziphi izinto ezingeloncedo ngocingo lwelayini? Zimbalwa iziphene ekusetyenzisweni kocingo lwe-lattice, kodwa ezilungileyo zisazodlula la manqaku mabi. Kukho izisombululo ezikhoyo kwingxaki nganye. Inye kukuba, xa kufikwa kubomi obugcweleyo, le isenokungabi yeyona ilungileyo kuba inemingxunya ebonakalayo kuyilo lwayo. Nangona kunjalo, usenokonwabela ukuhombisa kwe-lattice ukuba uyisebenzisa njenge-topper yocingo lwabucala.
Iingcingo zeLattice nazo azomelele ngokuthelekiswa nezinye iintlobo zocingo, ke qiniseka ukuba uphonononge ukhetho lwezinto onokuthi uzuze lukhulu kutyalo-mali lwakho. Ukuba uyisebenzisa ikakhulu kukhuseleko okanye ufuna ukuba imelane noxinzelelo olubanzi, unokukhetha ukwandisa ubukhulu bee-slats okanye ube nocingo olude olwenziwe ngesinyithi endaweni yoko. Isikhokelo esiphambili sokubiyela i-lattice sikhetha ngokwenene izinto ezifanelekileyo ngokusekwe kwiimfuno zakho kunye nezinto ozikhethayo.
Iingcingo ezibiyelweyo lukhetho olubiyelweyo kuhlahlo-lwabiwo mali njengoko zihlala zitshiphu kunamanye amatye okubiya. Ngokwesiqhelo kubiza umndilili wokujikeleza i-8 ukuya kwi-60 yeedola ngeenyawo zomgama, xa kuthelekiswa ne- $ 100 ngomgama wonyawo wokugubungela ukubiyelwa kwebhodi eqinileyo. Iiphaneli zokwenza ii-lattice ezenziwe ngokwezifiso azinalo ixabiso eliqhelekileyo kuba kuxhomekeke kudidi lweprojekthi. Iindleko ezongezelelekileyo zinokungena ukuba isango okanye umnyango wongezwe kucingo lwakho lwethayile.
Amacingo e-lattice e-wood end aphantsi axabisa i-2 ukuya kwi-5 yeedola ngeenyawo zomgama ngelixa iingcingo ezisemgangathweni zeenkuni zibiza i- $ 8 ukuya kwi-20 yeenyawo ngonyawo. Iingcingo zeplastiki ezisezantsi zinokubiza naphi na ukusuka kwi- $ 1.50 ukuya kwi-3.50 yeenyawo ngonyawo olulinganayo ngelixa iingcingo eziphezulu ze-vinyl zibiza malunga ne- $ 12 ukuya kwi-24 yeenyawo ngonyawo.
Iingcingo zeLattice zihlala zivela ngeendlela ezahlukeneyo ezizezi umnqamlezo we-criss, isikwere esenziwe ngesikwere, othini, othe tyaba kunye noyilo oluvulekileyo lokuluka. I-crisscross lattice lolona hlobo loyilo luqhelekileyo lubonakaliswa ngamacwecwe amancinci acwangciswe kwidayalonal okanye kwidayimani.
Uhlobo lwethayile lwedayimani
Ukuqandusela kwesikweri kwelinye icala, yenye yeklasikhi eneendawo ezivulekileyo zesikwere phakathi kweslats.
Olunye uhlobo luyilo loyilo lokuluka olwenziwe ngoo-spindle okanye i-slats ethe nkqo kwipateni ethe tye, ngelixa i-lattice ethe tye ine-slats elele tyaba I-lattice evulekile yokuluka ine-design enkulu eyenza ukuba ifaneleke kakhulu njenge-trellis yokunyuka kwemidiliya kunye neentyatyambo izitiya kunye nee-gazebos.
Iingcingo ezibiyelweyo zinokuxhonywa okanye zingadityaniswa, inokuba sisikrini esigcweleyo okanye isicoci socingo olukhoyo ngoku. Olunye ukhetho loyilo lubandakanya ngokuthe ngqo, scalloped okanye arched. Ubungakanani bayo bunokuhamba naphi na ukusuka kwi-3 yeenyawo ukuya kwi-8 yeenyawo ukuphakama kunye ne-4 yeenyawo ukuya kwiinyawo ububanzi, ngelixa isithuba phakathi kwe-slats sinokuhamba naphina ukusuka kwi-20 millimeters ukuya kuma-68 eemilimitha, ngesigunyaziso esiqhelekileyo semilimitha ezingama-40. Ukugqitywa kudla ngokuxhomekeka kuhlobo lwezinto ezisetyenzisiweyo kodwa zihlala zipeyintiwe, zinamabala, azigqitywanga (iinkuni) okanye umgubo wawutyabeka (ngesinyithi).
Ukuya shwankathela Nalu uvavanyo olupheleleyo lwezinto ezibalulekileyo kunye neempawu zocingo lwethayile:
Uyilo kunye nesibheno ngobuhle- Kulungile
Ukuhlala ixesha elide - Kusikelwe umda
Ixabiso - Umndilili
Ukhuseleko - Umndilili
Izinto zokubiya Lattice. Iingcingo zeLattice ziyafumaneka kuluhlu olubanzi lwezixhobo ezahlukileyo ngokwembonakalo yazo, ulondolozo, ukuhlala kunye neendleko. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngohlobo ngalunye, funda njengoko sikunika ukujonga ngokubanzi iimpawu zalo, iimfuno zolondolozo kunye neenzuzo / izinto ezingalunganga. Ukongeza koku, nantsi igalari yethu yeengcinga zoyilo lwethisisi yokukunceda ukhuthazwe ekukhetheni isitayile esifanelekileyo sendlu yakho.
Amacingo e-lattice anokusetyenziswa njengezikrini zepatiyo ezahlula indawo yokuhlala ngaphandle eyadini nasemva kwegadi. Uyilo locingo lwelati olwenziweyo lusebenza njengoyilo loyilo oluhombisayo kule patio iphefumlelweyo yaseAsia.
Oku kuphakanyisiwe uyilo lomgangatho wamaplanga yenza indawo egqibeleleyo yocingo lwabucala lwe-lattice lokudala indawo enomdla okhangayo ngelixa uhambisa ubumfihlo kumakhaya akufutshane.
Le patio yasemva kwendlu enomtsalane ngetayitile yocingo lwangasese oluyimfihlo inika indawo yokuphumla.
Iiphaneli zocingo lweLattice zinokudityaniswa kwezinye iindidi zocingo, ezinje ngezo ziboniswe apha ngasentla, apho iphaneli yomthi elukiweyo yomnqamlezo incanyathiselwe ngaphezulu kweepaneli ezintathu ezime nkqo phakathi kwezithuba.
Iiphaneli zocingo lweLattice ngamacandelo okubiya abekwe kwangaphambili athengiswa ngokwahlukeneyo. Ezi paneli zenziwe ngokulungileyo zihlala zi-3 ukuya kwi-8 yeenyawo ukuphakama nge-4 ukuya kwi-8 yeenyawo ububanzi kwaye ziyafumaneka ukuthengwa kwiivenkile zokuphucula ikhaya kunye nabathengisi bezinto zokubiya. Izinto eziqhelekileyo zeepaneli zocingo lwethanga ziyinkuni kunye nevinyl. Ziluncedo kakhulu kuba zinokufakwa nakweyiphi na indawo, zinokusetyenziselwa ukuvala umjikelezo opheleleyo wendlu okanye ukubuyisela icandelo elincinci locingo olukhoyo. Ngokumalunga nofakelo, azidingi ntlanganiso kwaye zihlala zibekwa emhlabeni ngaphandle kokumba. Ikwaqwalaselwa njengeendleko ezifanelekileyo kuba ifuna kuphela iindleko ezincinci zomsebenzi kunye nofakelo.
Iiphaneli zocingo lwesikrini esine-diagonal okanye isikwere sokuloba ziqhelekile kwimarike. Ngokwesiqhelo kwiinyawo ezi-4 nge-8 yeepaneli zesayizi yeenyawo, ihlala isetyenziswa njengezikrini, ukwahlulahlula okanye izahlulelo ezincinci. Iipaneli zescreen seLatice zikwalungele ukugubungela iimbono ezingathandekiyo ngaphakathi kweyadi njengenkqubo ye-HVAC okanye iinkonkxa zenkunkuma. Ngaphandle kwalonto, inokusetyenziswa njengemida yocingo lwegadi ukukhusela izityalo kwizilwanyana ezincinci okanye izilwanyana. Kuba ihombisa kakhulu, iiphaneli zesikrini esinye se-lattice nazo zinokongezwa njengezinto ezibonakalayo kwimpawu zomhlaba.
Inkangeleko engagqitywanga yale ndawo yokubiyela yeplanga yocingo bubuhle bendalo ngokwayo. Yahlula imida yekhaya ngelixa ishenxisa imvakalelo ethintelayo yocingo lwabucala.
Iphaneli emhlophe yeVinyl Fence 6ft x 8ft - Indlela
Iipaneli zocingo zeVinyl akukho lula ukufaka kuphela kodwa zihlala zomelele kwaye ziyanyamezela nakwezinye izinto zangaphandle. Olu luyilo lufana ncam nokubonakala kocingo olumhlophe olucwecwe ngomthi olunomphezulu we-lattice-onika ubuhle obufanayo obunabo bomthi kodwa obunomgangatho ohlala ixesha elide.
Iphaneli yoCingo lweBamboo eneLatice ephezulu
Ucingo lwe-bamboo oluneepaneli eziphezulu zelebhu zilungele ukongeza i-oriental flair okanye i-tropical feel to patios, gardens and verandas, okanye ukuba ufuna ukuyila, olu luyilo lunokusetyenziselwa ukwahlula izithuba ezibonelela ngokusebenza kunye nokuhombisa.
Umgangatho ongasemva kwendlu ubeka ucingo lwe-DIY usebenzisa iipaneli zelethi eziqhotyoshelwe kwisakhelo somthi, kunye ne-aluminium canopy kunye neseti yokutya yangaphandle.
Iipaneli zocingo eziphezulu ze-lattice ziintloko ezi-lattiweyo okanye izandiso ezigxunyekwe encotsheni yocingo esele lukhona. Ezi ziiphaneli ezinde ezihlala zenziwe ngoxinzelelo lwenkuni okanye i-vinyl. Ukuhonjiswa ngokusulungekileyo ekusebenziseni, ezi zezokhetho lokhetho kwezinye iintlobo zocingo. Iyafumaneka kuyilo olwahlukeneyo kunye nezitayile ezinje nge-arched, curved, slatted, picketed or circled. Abanye abathengisi bavumela ukhetho olwenziwe ngokwesiko olwenza ukuba lube nokusetyenziswa ngokubanzi.
Olu hlobo lwento yokubiyela ilungile kubanini bamakhaya abathanda iinkcukacha zeletices kodwa bafuna ubumfihlo ngakumbi. Kuba inokuncanyathiselwa ngokulula ngaphezulu kweefreyim zabucala ezibiyelweyo, uya kukonwabela ubuhle bokuyilwa komtsalane ngaphandle kokuphazamisa ukubekwa bucala kwendawo yakho yangaphandle. Ngaphandle kokuba kukuhonjiswa kocingo okunomdla, zikwasebenza njengokongezwa kwemihombiso kunye neendawo zokubeka ilanga kunye neebhokisi zezityalo.
Ngaphandle kwendlela yokuwela umnqamlezo oqhelekileyo kunye nepateni yediagonal, iiphaneli zecala eliphezulu zocingo zinokulungelelaniswa nolunye uyilo. Iphaneli yocingo lwabucala engagqitywanga eyenziwe ngomthi ibonisa iinkcukacha ezintsonkothileyo zamaqhina kunye neenkozo ezenza ukuba olu luyilo luphume ngesibheno esahlukileyo nesinomdla.
Cedar Fence kunye Aluminium Lattice Phezulu
Iphaneli yokudibanisa yabucala yenziwe ngokudityaniswa komthi weCedar kwiindonga zocingo kunye nomgubo ogalelwe ialuminiyam ngaphezulu kweleta kunye nezithuba. Ukudityaniswa kwezixhobo ezibini ngokudibeneyo akuniki kuphela ucingo uzinzo ngakumbi kodwa kukwakhona ngokudibanisa ngokubhekisele kubuhle. Inkangeleko yayo ehlengahlengisiweyo ilungele amakhaya anamhlanje amancinci.
I-Western Red Cedar Fence ene-Lattice ephezulu
Kukho into malunga nesibheno esahlukileyo somthi ongagqitywanga owenza ukuba unqweneleke kakhulu kwaye uthandwe kakuhle ngabanini bamakhaya abaninzi. Olu cingo lubomvu lweCedar olunomphezulu we-lattice alugcinanga ngokwendalo kuphela kwaye luyamelana nokubola kodwa luzisa nomtsalane erustic nakweyiphi na indawo yangaphandle.
IVinyl iyindlela esebenzayo kunye neendleko ngoku kwizinto zamandulo ezinje ngomthi kunye nentsimbi. Isixhobo esingasindi esinempawu ezintle.Ucingo lwe-Vinyl lattice luhlala luqinile kwaye luyakwazi ukumelana nazo zonke iimeko zemozulu. Ayiboli kwaye iyamelana nezinto ezirhabaxa ezifana nokubumba, ukungunda, izinambuzane nokubola. Ngokungafaniyo neenkuni, iingcingo ze-vinyl ze-lattice azenzi i-warp, splinter kunye ne-crack. Ulondolozo ngobulumko, yonke into oyifunayo kukuyibhuqa ngamanzi ukuze ihlale icocekile. Kuba umbala weocingo lwe-vinyl lattice ubunjiwe kwizinto eziphathekayo, ipeyinti ebotshiweyo yenye yezinto onokungazikhathazi ngayo. Akukho sidingo sogcino rhoqo njengonyango lwamaxesha ngamaxesha, ukutywina kunye nokupeyinta kwakhona. Ukufuduka kuza ngokulula kunye nokufakwa kufuna kuphela umzamo omncinci.
Ngokwendlela yoyilo, ucingo lwe-vinyl lattice lubhetyebhetye kuba luza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nemibala. Nangona ucingo oluqhelekileyo lwecriss cross lattice luqhele ukusetyenziswa kwizitiya zemveli kunye nezakudala eziphefumlelweyo, ivinyl yenza indlela yokuba ifaneleke ngakumbi kusetyenziso lwangoku okanye lwangoku kuba ukubonakala kunokuhlaziywa. Abanye abathengisi bavumela ukwenziwa ngokwezifiso nazo, ezenza ukuba zilungele nawuphi na umxholo. Unokuhamba ngesikwere esilula okanye ipateni yedayimane, okanye ukuba ufuna enye into yokuhombisa, yenze ngokwesiko kunye nephethini entsonkothileyo.Kukwangqinwa ukuba lulondolozo-mali olumkileyo, olubiza kuphela i-12 ukuya kwi-24 yeedola ngeenyawo, kunye newaranti yobomi eqinisekisiweyo eza nebhonasi ephumeleleyo.
Iiphaneli zocingo lweVinyl lattice zilungile ezenziwe ngeepaneli zocingo, ezenziwe ngevinyl, kwaye zithengiswa ngokwamacandelo. Zineempawu ezifanayo zokomelela ezikhankanywe apha ngasentla kwaye zihlala zilondolozwa simahla-zifuna ukuhlanjwa ngokukhawuleza kwamanzi ukucoca. Iiphaneli zocingo lwe-Vinyl lattice zinokufakwa ngokuthe nkqo okanye ngokuthe tye kwaye kulula kakhulu nokuzifaka. Ingasetyenziselwa njengothotho lweepaneli ukukhusela indawo, okanye njengesiqwenga esinye ukongeza isandi kwigadi, iipatio okanye iverandas.
Iiphaneli zocingo ezimhlophe ezibiyelweyo - Imvelaphi
Iiphaneli zocingo ezimhlophe zethayile ye-vinyl iyancedisa uyilo lwale gadi iphefumlelweyo yesiNgesi ngelixa inika umdiliya kunye nezityalo indawo yokukhula.
Iphaneli emhlophe emhlophe yeVinyl ebiyelweyo eGadini 1ft x 4 ft - Imvelaphi
Iipaneli zocingo ze-vinyl lattice zemodyuli zisebenza ngeenjongo ezimbini njengoko zinokulungiswa ngaphezulu kocingo lwabucala olukhoyo njengokwandiswa kokuhombisa, okanye inokusetyenziswa njengoko kunjalo - njengomda wezityalo okanye wegadi. Iyahlala kwaye ihlala ixesha elide, olu luyilo lukwalungele ukukhusela iblukhwe kunye nokusebenza njengezinto zokuhombisa nakweyiphi na imbonakalo yomhlaba.
Iingcingo zeplastikhi ezibiyelweyo ziphantse zafana neengcingo ze-vinyl lattice. Ikwayinto elula engasetyenziswanga sisinambuzane kunye nokubola. Ayifuni naluphi na unyango ukuyikhusela kubumanzi kuba ayinamanzi. Ihlala ifumaneka ngemibala engathathi hlangothi emhlophe, emdaka, beige, eluhlaza, eluhlaza okomhlaba kunye nokugqitywa ngomthi.Iingcingo zeplastiki ezibiyelweyo zihlala zibunjiwe ukulingisa ukubonakala kwezinto zendalo ezinje ngomthi. Kuba ngamanye amaxesha icinezelwa ngombala, kuyenzeka ukuba uqokelele ukungunda nto leyo ifuna ukucocwa okungaphezulu.
Banokhetho olunemida ngenxa yokuba ipeyinti ayihambelani kakuhle nazo. Ukuba ufuna ukutshintsha umbala wocingo lwakho lweplastikhi, oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uthenge uhlobo oluthile lwepeyinti yokutshiza ebiza kakhulu. Ngaphandle kwalonto, enye yeengxaki zayo inomdla wokurhoxa kunye nokwandisa, inikezwe ukuba sisiqwenga esiqhubekayo esibunjiweyo njenge-lattice epheleleyo. Ke ngexesha lofakelo, kufuna isixa esikhulu somsantsa ukuvumela ukuhamba kobushushu. Iingcingo zeplastikhi nazo ziyaqhekeka xa zichanabeke kubushushu obugqithisileyo.
Iiphaneli zocingo zeplastiki zihlala zicinezelwe ngoburhabaxa kwaye zibunjwe kwiindlela ezahlukeneyo zokulinganisa ukuvela kwezinto zendalo. Olu cingo lweplastiki lubambe uyilo lokuluka oluvulekileyo olulungele kakhulu ukuxhoma iiplantara, ukubonisa izikhongozeli zeentyatyambo kunye nokukhula kwezityalo ezilandelelayo.
White Plastic Lattice Kucingo olubiyele iinkonkxa Inkunkuma - Imvelaphi
Enye yeenjongo ezizodwa ezinokubonelelwa ngeepaneli zocingo lwe-latt kukuba inokusetyenziselwa ukufihla iimbono ezingathandekiyo kwiyadi yangasemva. Wuthiyile umbono wenkunkuma enkulu, izixhobo zamachibi okanye ezinye izilonda zamehlo eyadini yakho? Ke oku kunokuba sisisombululo esifanelekileyo nesilula kuwe.
Uthandwa kakhulu ngobuhle bendalo kunye nokuguquguquka, ukhuni luthathwa njengeyona nto ithandwa kakhulu kwiingcingo ze-lattice. Ngaphandle kokuba yinto ezinzileyo, umthi ulawuleka ngokwakhiwa kuba unokusikwa ngokulula kubungakanani obahlukeneyo kunye nemilo, isenza ukuba ilungele kakhulu iilebhu. Inenkangeleko yendalo eyahlukileyo kunye neemvakalelo ezingenakulinganiswa nayo nayiphi na enye into. Njengobudala bemithi, isibheno sayo sobuhle sonyuka ngenxa yeethinti ezizodwa kunye neepateni zokucoca ezitshintsha kakhulu kwimozulu. Ukongeza kuloo nto, umthi unokupeyintwa ngokulula okanye ungcoliswe nangayiphi na imibala egqityiweyo oyifunayo. Imihlobiso nayo kulula ukuyinamathisela, iyenza ibhetyebhetye kakhulu ngokwesicelo yoyilo. Iingcingo ezibiyelweyo zokhuni zinokuhlala iminyaka kuba zihlala ixesha elide. Kuhlala kubiza ixabiso eliphantsi nge- $ 8 ukuya kwi-20 yeedola ngomgama onyawo.
Iingxaki zayo zibandakanya ukugcinwa rhoqo kunye nokugcinwa. Ukuze igcinwe ikwimeko entle, iingcingo ezibiyelweyo ezibiyelweyo mazigcinwe ngamaxesha athile kunyango, ukungqinisisa ukungcola nokupeyinta kwakhona. Iingcingo ezibiyelweyo zomthi ziyachaphazeleka kwizinambuzane nakwiintubi, nto leyo ethetha ukuba ifuna unyango ngaphambi kokuyisebenzisa. Inotyekelo lokuqhekeka, ukuluka okanye ukwandisa xa luvezwe kwizinto ezingaphandle ezibukhali. Kuba iinkuni ziyabola, kukwathetha ukuba kufuneka kutshintshwe ngazo ekugqibeleni. Nangona kunjalo, ezi zinto zingathandekiyo zinokuthintelwa ukuba uhlobo olufanelekileyo lweenkuni lusetyenziselwa ucingo lwakho lwe-lattice.
Ezona ntlobo zixhaphakileyo zomthi ezisetyenziselwa ukubiyela ngumthi obomvu nomsedare njengoko zombini ezi ndidi zomelele ngokwendalo xa zimanzi nezinambuzane zinganyangeki. I-Birch kunye nepine nazo ezinye iindlela kodwa zifuna unyango loxinzelelo kuqala ngaphambi kokusetyenziswa.
Iipaneli zelebhu zomthi zinokwenziwa ngokwezifiso kakhulu ngokokuthanda komntu okukhethekileyo kwisitayile. Akukho mgaqo ngokubanzi wokuba iiphaneli zocingo lwe-lattice kufuneka zihlale zilandela iphethini yokuluka edibeneyo, unokuba nobuchule ekuhloleni iipateni nasekuhlanganiseni uyilo locingo olukhoyo ngoku.
Olu cingo lwakudala lweplanga lokuluka i-lattice ucingo lubonisa indawo engaphandle yeli khaya ngaphandle kokuthintela umbono kunye nokuvumela abaninimzi ukuba bonwabele umbono kwaye bavumele umoya ohlaziyayo kunye nelanga ukuba lidlule.
Uyilo lwale mibala eluhlaza yokhuni lweplanga ludityaniswe nemibala yeentyatyambo yokuhombisa kunye nokuhombisa kunye nombala oluhlaza okhuthazayo uhambelana namagqabi aluhlaza. Amacingo e-lattice anokusetyenziswa njengemida ejikelezayo hayi yeendawo zokuhlala kuphela kodwa naluphi na uhlobo lwendawo engaphandle.
Izimvo zokunxiba iindwendwe zomtshato elwandle
Isikrini somoya ovavanyiweyo seWood - Imvelaphi
Esi silungile senziwe ngamacala amathathu escreen somthi esetyenziselwa ukufihla umbono ongathandekiyo weenkqubo zokupholisa umoya ngendlela enesitayile. Sisisombululo esikhawulezayo, esifikelelekayo nesinencasa kakhulu ekunyangeni izinto eziqhelekileyo ezingathandekiyo kunye nezixhobo ezikhulu ekhaya.
Umsedare luhlobo lomthi othambileyo odla ngokukhuliswa kwiindawo ezinemozulu efumileyo, eyenza ukuba ihambelane nendalo kwizinto ezinje ngomswakama, ukungunda, ukungunda kunye nezinambuzane. Umsedare, kunye neRedwood, nawo avelisa ioyile yendalo eyinika amandla okulwa nokubola kunye nezinambuzane. Ngokungafaniyo nezinye iintlobo zeenkuni, ayifuni kunyangwa kwaye itywinwe ngemichiza ngaphambi kokusetyenziswa. Ukomelela kwayo kunye nokukwazi ukumelana notshintsho kwimozulu kuyenza ibe yinto ephezulu yokwakha ngaphandle. Kudala lukhetho oluthandwayo kwizinto zokubiya.
Iingcingo ze-cedar lattice zibonakaliswe zizinzile, zomelele kakhulu kwaye azilulanga, zahlulahluke, zijijike okanye ziqhekeke. Kuqinisekisiwe ukuba kuhlala ixesha elide kunezinye iingcingo ezenziwe ngomthi othambileyo ofana nepine. Ayizukukwazi ukumelana nemozulu kuphela, kodwa ikwagcina nokuma kwayo kwaye igcine ulungelelwaniso lwayo ngokuthe ngqo ekuhambeni kwexesha. Ngokwe-aesthetics, iingcingo zeCedar lattice zinomtsalane obonakalayo omangalisayo.
Iingcingo ze-cedar lattice akufuneki ukuba zingcoliswe okanye zipeyintwe njengoko zintle ngokwaneleyo ngokwazo-zijike kumbala ongwevu ocacileyo njengoko indala. Nangona i-Cedar ixabisa ngakumbi xa ithelekiswa nolunye uthango lweenkuni, kuyangqinwa ukuba sisisombululo esineendleko xa kuthathelwa ingqalelo ukuba siyakuhlala ixesha elide. Ngokubanzi, isaziwa njengenye yezona zinto zinokufikeleleka kakhulu kwiingcingo ze-lattice. Ulondolozo lulumkile, aludingi kudyobha nokutywina, kodwa lufuna ukugcinwa kancinci ukuze kugcinwe imeko yalo intle.
Umsedare lolona khetho lufanelekileyo kwiingcingo ezibiyelweyo ngenxa yokomelela kwendalo kunye nobuhle bayo obuhle. Olu lwakhiwo luqinileyo lucingo lwaphezulu lubonelela ngemfihlo kule ngasemva kwendlu ngelixa usongeza umtsalane we-rustic egadini.
Ucingo lomsedare kunye nesango kunye ne-lattice top
Inkangeleko yoyilo locingo lwelatti inokuphuculwa ngesango elilinganayo okanye umnyango. Olu cingo lweplanga lwenziwe ngamaplanga omthi omsedare olomeleleyo ongezantsi kunye nentloko elula yoxande kwindawo egqibeleleyo yendalo.
Isinyithi ngumsebenzi onzima onamandla amakhulu kunye nokomelela. Iyaziwa ngokuzinza kwayo kunye nokukwazi ukuhlala iminyaka. Iindidi eziqhelekileyo zesinyithi ezisetyenziswa njengezixhobo zokubiya ziyintsimbi, intsimbi okanye ialuminium. Kuba kunzima ukwaphula, iingcingo zeleta zentsimbi zenza ukhetho olugqwesileyo kubanini bamakhaya abafuna ukuqinisekisa ngokhuseleko kunye nokhuseleko ngaphandle kokuncama ukubonakala kocingo lwe-lattice.
Amacingo e-lattice e-Metal angenziwa ngokwezifiso nakweyiphi na uyilo, evumela ukuba ukhethe kwiintlobo ezahlukeneyo zokuhombisa, nangona kunjalo abanye abaninimzi basakufumanisa kunqongophele ekusebenzeni. Nangona ingayi kubola, i-warp, ukubola okanye ihlaselwe ngumhlwa, iingcingo zentsimbi ziye zithande ukurusa xa ziveliswa kwizinto zangaphandle. Ifuna ulondolozo lwarhoqo njengokunikwa indawo ngokutsha kunye nokupeyinta ukuqinisekisa imeko yayo elungileyo. Ezinye zeempawu ezingalunganga zibandakanya ukukhululeka okuncinci ekuphatheni izinto ngenxa yobunzima bayo obukhulu. Ayilunganga njengeProjekthi ngokwakho kuba kuyanzima ukuyifaka. Kuyabiza kakhulu kunezinye izinto zokubiya
Iingcingo ze-metal lattice zingenziwa ngokwezifiso kwiipatheni ezinzima, njengale iboniswe ngasentla. Olu luyilo lubandakanye ucingo lwentsimbi olubambe udonga lokujikeleza ngezitena kunye nelitye. Ibhokisi yeentyatyambo eyakhelwe-ngaphakathi enemibala emininzi kunye neentyatyambo ezishushu zisetyenziselwa ukongeza umahluko kubume kunye nokubonakala ngokubanzi kwesi sithuba.
Isitayile esihle saseSpain esineepatio ezinkulu ezineefestile ezinkulu ezigobileyo ezisebenzisa i-lattice yensimbi njengocingo lokhuseleko ngelixa likuvumela ukuba uthathe umbono weentaba.
Iingcingo ezibambe ongezantsi aziboneleli kuphela ngokhuseleko kodwa zikwabonisa ubuhle bendlu yakho kunye nasemva kwendlu. Indlela entle yokuchaza iiperimitha ngaphandle kokugubungela umbono.
Iingcingo ezineziciko zelebhu zihlala zibiyelwe ngasese ezihonjiswe ngezihloko zeletisi. Iibhodi ezi-4 ukuya kwezi-6 zeeplati ezithe tyaba ziyaphathwa nge-1 i-lattice toppers yoyilo, ngokuthe ngqo okanye kuyilo lwe-scalloped. Olu hlobo locingo lwe-lattice lulungele abaninimzi abathanda ukubonwa kwe-lattice kodwa bakhethe ukuhlukaniswa kocingo lwabucala.
Ucingo olubiyele iredwood ngesango - Imvelaphi
I-Redwood lolunye ukhetho oluphezulu lokubiyela i-lattice yokhuni ngenxa yombala wayo ocacileyo o-bomvu ocacileyo owenza ukuba ugqame kwaye wongeze imvakalelo efudumeleyo yokuzivalela ezindlwini. Olu cingo lwangasese lunebhodi egcweleyo yebhodi ethe tyaba kunye ne-diagonal top lattice, ehambelana nesango elipheleleyo leplanga yeplango kwisiphelo sendalo esicacileyo sendalo.
Ummelwane olungileyo weRedwood Fence eneLatice ephezulu
Ngokwesiqhelo, iingcingo zabucala zomthi zisetyenziselwa ukwenza imigca enqamlezileyo phakathi kweepropathi ezimbini, kodwa iingcingo ezibambezelayo zibonelela ngesisombululo esisesinye koku ngokuchaza izithuba ngaphandle kothintelo oluninzi. Olu cingo luphezulu lwedayimani locingo lusetyenziswa njengesixhobo sokuhombisa le ndawo icacileyo.
Iingcingo zabucala zeLattice ziyimhombiso kwaye ziyasebenza ngokubhloka umgca wokujonga eyadini okanye kwipropathi. Olu hlobo locingo lwethisi luhlala luziimitha ezi-6 ubude kwaye inokuba neebhodi ezinde ezinesihloko se-lattice, okanye ipaneli epheleleyo ye-lattice enepateni eqinisayo kunesiqhelo se-lattice screen. Iingcingo zabucala zeLattice zihlala zinezithuba zeemilimitha ezingama-20 phakathi kweslats. Iphethini yokwaluka yenza kube nzima ukuba abantu bajonge kwipropathi njengoko ihlala ifihla yonke into eyadini yakho.
Iibhodi zocingo ezimhlophe ezenziwe ngomthi ezine-lattice top lattice zinokuchukumisa ubuqaqawuli beklasikhi obuhambelana kakuhle negadi yendabuko. Basebenza njengemvelaphi egqibeleleyo kunye nokukhangela iintyatyambo ezintle kunye neentyatyambo ezininzi.
Indawo engasemva kwesitropiki inendawo yomthi enebala elimnyama kunye nokuthelekisa ucingo oluthe tyaba kunye nomphezulu we-lattice. ukongezwa kweepaneli zelesti ngaphezulu kocingo kunceda ukubonelela ngemfihlo kubamelwane abakufutshane.
Olu cingo luhlanganisiweyo lwebhodi ethe tyaba kunye nelayini edibeneyo yokugxininisa lugxininiswa ngokugqitywa kwesiFrentshi seGothic kwisithuba ngasinye socingo. Ukugqitywa kwipeyinti eluhlaza kunye nomhlophe omnquma othulisiweyo, olu luyilo luthatha ixesha langoku kwifensi yemveli.
Le patio yasemva kwendlu enendawo encinci yegadi ingqongwe ngocingo olumhlophe oluphezulu kunye nesango eligobileyo. I-pergola emxinwa ibekwe ngaphezulu kocingo kwaye ibonelela ngomthunzi kunye nento yoyilo enomtsalane.
Inkangeleko edibeneyo yale bhodi yeplanga yentsimbi enocingo oluphezulu lwethisisi inika umtsalane we-rustic njengoko ikhusela ipatio kwindawo engaphandle yokuphumla yokonwabisa abahlobo kunye nokuqokelela amalungu osapho.
Iingcingo zeLattice zihlala zisetyenziswa njengendawo yokufaka i-spa. Kuboniswe kumfanekiso ongentla yindawo efudumeleyo, ecocekileyo yangaphandle yeJacuzzi kunye nendawo yokuphumla evalelwe ngocingo lweplanga yokhuni ehambelana ngokugqibeleleyo nezinto zokuhombisa.
Iingcingo ezibambe isikwere zinesimbo sendabuko kwaye zihlala zisetyenziswa njengocingo lwasegadini okanye iimpawu zomhlaba. Izithuba eziphakathi kweeslats ezimileyo nezithe tye zenza ukuba kufaneleke kakhulu njenge-trellis yokunyuka kwezityalo kunye nokulandela umdiliya.
Uluhlu lweengcingo ezixutywe ngokuvumelanayo kunye neendawo ezijikelezileyo zoluvo lwe-organic. Olu luyilo lubonisa ucingo olumhlophe olucocekileyo lwesango kunye nesango le-pergola elihonjiswe nge-petunias eqaqambileyo kunye nemidiliya echumayo. Thetha ngomthendeleko othandekayo ngamehlo!
Esi sithuba sicocekileyo sokuhambisa ipatio kwiscangca saso se-redwood lattice kunye ne-pergola encinci ukubonelela ngemfihlo kunye nomthunzi. Ukongezwa kwensimbi yentsimbi eyenziwe ngocingo kunye nefenitshala yangaphandle yensimbi inika i-classic ambiance.
Ucingo lweLat Latice kunye neSango kunye neMidiliya yokuHlengisa
Yandisa izitiya zokulima kunye nokusetyenziswa kocingo olubiyelweyo. Izithuba eziphakathi kwe-slats ephothiweyo zilungele ukulima ngokuthe nkqo kunye nokukhula kwemidiliya kunye nokulandela izityalo.
Indawo evulekileyo yesikwere inee-slats ezityebileyo ezibonelela ngohlobo olomelele ngakumbi locingo lwe-lattice. Apha siyibona njengomnyango kunye nomda weyadi engaphambili yendlu.
Iingcingo ezimhlophe ezibiyelweyo ziyintandokazi kwimihlaba ephefumlelweyo yeklasi kunye neegadi zecottage. Njenge Uyilo locingo lweepokethi , Banikezela ngomtsalane weklasikhi kwiindawo zangaphandle.
Olu cingo lumhlophe lumhlophe lubekwe macala kule patio intle. Iingcingo eziMhlophe zinomtsalane weklasikhi ongapheliyo ofanele indawo yangaphandle okanye yendlu ephefumlelweyo.
Kwiyadi entle egadiwe ngasemva enephuli yokuqubha encinci kunye nocingo lwala maxesha lwokhuseleko nokhuseleko lwabucala. I-Lattice lukhetho olukhulu kwabo bafuna ukwenza indawo eyimfihlo ngakumbi yokugcakamela ilanga. Bona Okuninzi izimvo zocingo lwedike Apha.
Ucingo olumhlophe oluneebhokisi zeentyatyambo lwenza umtsalane ukongeza kwigadi kwaye lunokuphuculwa ngakumbi ngokunyuka kweentyatyambo ukunceda ukudala imeko-bume engasemva yasemva kwezindlu.
Nanku omnye umzekelo wocingo lwabucala olumhlophe olunomphezulu we-lattice owahlula esi sithuba sepatiyinti esiqhelekileyo kwiyadi yommelwane. Uyilo locingo lwethtice lunokuphuculwa ngokusetyenziswa kwento yangaphandle yamanzi okanye umthombo omncinci njengalowo uboniswe ngasentla.
Iingcingo ezimhlophe ze-lattice kunye ne-trailing vines zongeza into ebonakalayo ebonakalayo kwinkangeleko yale gadi intle yanamhlanje.
Iiphaneli zocingo olusezantsi nolufutshane lwe-lattice yocingo luchaza umda wale propati kwaye lubonelela ngasemva kokuhombisa iibhentshi zentsimbi nazo.
Uphahla olumhlophe lwe-lattice lunokubonelela ngomthunzi wepati yangasemva kwelanga kunye nokudala amava amnandi ngakumbi okuzonwabisa kunye nokunxibelelana nabahlobo kunye nosapho.
Le ndawo inomtsalane emva kwendlu inikezela ngeepaneli zocingo ezimhlophe zethango kunye nophahla lwelayini ukwenza indawo yokusabela emema. Iiphaneli zocingo zilungele indawo apho ungathanda ukongeza ubumfihlo njengokuthintela umgca wokujonga kwifestile yabamelwane, okanye kwisitalato.
I-gazebo ene-lattice inokubonelela ngasemva kokuthandana okuya kukhulisa indawo yakho yangasemva okanye ipatio. Ukongeza iipaneli zeletti kulwakhiwo kulula ukwenza kwaye kunokubonelela ngomthunzi kunye nemfihlo ukukunceda wenze indawo efanelekileyo yokuhlala kunye nokuphumla.
Le gazebo yokhuni intle inika indawo efanelekileyo yokuphumla kunye nokunyuka kweentyatyambo kunye nokuhlala ngaphakathi kwebhentshi. I-lattice yeplanga yokuhombisa yongeza umdla kwaye iyanceda ukuvumela iintyatyambo ukuba zenyuke kulwakhiwo.
Khawufane ucinge uhleli kule gadi intle ujikelezwe yile dome yesinyithi yokuhombisa ngomsebenzi ontsonkothileyo kwaye wonwabele usuku. Ifenitshala yangaphandle ebandakanya izitulo ezibini kunye ne-loveseat zibonelela ngeendawo ezininzi zokuzonwabisa kunye nokuhlala kunye nabahlobo kunye nosapho.
Le pergola yokhuni enamacala e-lattice yenza indawo enomtsalane kule ndawo ingasemva. Iintyatyambo ezimibalabala kunye nengca enkulu inika le pergola indawo eyonwabisayo ngaphandle.
Ngaphandle kokuthenga iipaneli zeletisi esele zenziwe okanye uku-odola ipaneli eyenziwe ngokwesiqhelo kumthengisi wasekhaya, iingcingo zethayile zinokuthathwa njengeprojekthi Yenza ngokwakho. Iilatices kulula ukuzenza njengoko kufuna kuphela ukusika ii-slats ezincinci kumthi womthi usebenzisa isarha ejikelezayo, emva koko iziphelo zesahlulo ngasinye zinqunyiwe ngekona, zibethelelwe okanye zibethelelwe kwindawo yokuhlangana. Inokuba sisikwere okanye idiagonal kwipateni kwaye isakhelo soxande sinokongezwa ukugqibezela ukujonga.
Ubuhle bokwakha ucingo lwakho lwe-lattice kukuba ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso inkululeko yakho ngokuxhomekeke kwintetho yakho. Uyilo luye lube lolomntu ngakumbi kwaye ii-decors zinokongezwa ngokokukhetha komntu. Ikwavumela ukuba wenze ucingo lwe-lattice ngaphandle kwezinto ezintsha okanye ezindala. Iingcingo zeLattice zinokudityaniswa nezinye izinto ezinje ngomthi, ikhonkrithi okanye ilitye. Ingabandakanywa kwimimandla yomhlaba okanye isetyenziswe njengesigxina semida yezityalo, i-skirting skirting kunye ne-railings.
I-Weather Redwood Fence ene-Lattice ephezulu
Iiplanga zocingo lwelayini ezinamacala avalwe ngoku zibonelela ngendlela yokuhombisa yokwandisa ukuphakama kokubiyelwa ngasese. Inkangeleko ecekeceke yolu cingo lwethisisi luzalisekisa isibheno se-rustic se-shingles kwicala lendlu.
Nangona kunjalo, kwabo banqwenela ukunceda ukugcina iinkuni kwaye bayinike ukuphakanyiswa kobuso banokufaka amabala okugqiba kunye neziphumo ezilungileyo. Elinye iqhinga lokuphepha umsebenzi odinisayo wokudyobha phakathi kwe-slats kukusebenzisa ukutshiza kwimveliso yebala efana neThompson's WaterSeal. Iza ngombala wendabuko kwaye yindawo yokutshiza eya kukugcina ixesha elininzi kunye namandla xa kufika ixesha lokubuyisa ucingo ukuba lukhangeleke lutsha.
Ukufaka isango le-lattice yesango yenye indlela yokufumana ukuhonjiswa kwale ndlela. Ezi ntlobo zamasango zingathengwa kwiivenkile ezinkulu zehardware kwaye uzifake ngokwakho usebenzisa izixhobo ezihlanganisiweyo zekhompyutha emva kwemini.
Ukuba unayo ixesha kwaye ungathanda ukuzama isandla sakho kulwakhiwo olulula, emva koko ukwakha ucingo lwe-lattice kunokuba yiprojekthi efanelekileyo kuwe. Ifuna indibano encinci kwaye kulula kakhulu ukuyakha kunezinye iintlobo zocingo, ihlala ithatha iintsuku ezi-2 ukuya kwezi-3 ukuyifeza kwaye ayinakubangela mngxunya mkhulu epokothweni yakho. Ukongeza kuloo nto, Zenzele iiprojekthi zikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso uyilo lwakho ngokweemfuno zakho ezithile kunye nokukhethwa kwesitayile.
Kule tutorial, siza kube sifundisa ngendlela yokwakha ucingo lwakho lwelayini. Olu luyilo lusebenzisa i-lattice eyenziwe ngomthi njengoko isusa isidingo sokudibanisa zonke iziqwenga ndawonye, ​​zikongela ixesha elininzi. Nazi ezinye zezixhobo kunye nezixhobo ezifunekayo zokwakha ucingo lweplanga, kunye namanyathelo onokuwalandela ukwenza enye:
Izikrini ze-2-intshi ezihlanganisiweyo
I-4 x 4 yezithuba eziphathwayo
4 'x 8' uxinzelelo oluphathwayo ilati (eyenziwe yalungiswa kwaye iyafumaneka kwiivenkile zokuphucula ikhaya)
Umxube wesamente (unokusebenzisa ikhonkrithi ngokukhawuleza)
ISetyhula yabona okanye ijigsaw
Isabelo # 5
Ukufaka iiLatice Fence Panels
Amanyathelo okwakha uthango lwamaplanga:
• Chonga uyilo, injongo nobume bocingo lwakho lwelat. Isinyathelo sokuqala mhlawumbi nayiphi na iprojekthi kukufumanisa injongo yento ozimisele ukuyakha, kuba oku kuyalela zonke ezinye izinto ekufuneka uziqwalasele njengobungakanani, ukuphakama kunye nokubekwa. Yazi injongo yocingo lwakho lwe-lattice- Ngaba luya kusetyenziswa ukugubungela yonke iperimeter yepropathi yakho, ngaba iya kusetyenziselwa ubumfihlo, okanye ngaba ufuna nje ukuyisebenzisa njengegama lokuhombisa? Ngokwendalo, ucingo olubiyekileyo oluya kusetyenziselwa ukwenza izinto ngasese luya kufuna iipaneli ezinde kunye nephethini eqinileyo yokuluka. Ngenxa yoko, ubungakanani, uyilo kunye noyilo ojolise kulo ukufezekisa luya kulandela. Nje ukuba uthathe isigqibo ngezi zinto, lixesha lokuba ulungiselele indawo yocingo lwakho lwethisisi.
• Linganisa indawo. Usebenzisa itheyiphu yokulinganisa, linganisa umjikelezo wesithuba apho uza kubeka khona ucingo lwakho lwelatin. Kubalulekile ukulinganisa ngokuchanekileyo kuba oku kuyakuqinisekisa uhlengahlengiso oluncinci kubungakanani bezinto zokusika njengoko uqhubeka neprojekthi. Oku kuya kukunika umbono wenani elichanekileyo lezithuba zomthi kunye neepaneli zeleti oya kuzifuna.
• Khangela indawo yokuqala ucingo lwakho. Phawula eli nqaku ngokuthepha isibonda somthi endaweni yaso emhlabeni, emva koko ubekise wonke umgca wocingo lwakho usebenzisa umtya wemason. Ubude beepaneli zakho zecandelo zingasetyenziselwa njengesikhokelo sithuba sezithuba. Kuxhomekeke kuwe ukuba uyafuna ukufaka iipaneli ngokuthe nkqo okanye ngokuthe tye. Kodwa esona sithuba siphezulu sizi-8 iinyawo phakathi kweposti nganye. Yongeza izibonda ukumakisha indawo nganye yesithuba. Qhubeka noku de ugqibe umgca wocingo wonke. Qiniseka ukuba ugcina isithuba esilinganayo kuyo yonke indawo.
• Baleka iintambo ecaleni komgca wocingo lwakho. Bopha isibonda sokuqala (ukuqala kwakho kocingo) ngewele kwaye ubaleke kwisibonda ngasinye. Qinisekisa ukuba eli twine lisebenza ngqo, ukuba kunokwenzeka ubone ukungangqinelani, unokuhlengahlengisa izikhonkwane ngokufanelekileyo.
• Bamba umngxunya wezithuba zakho. Susa isibonda sokuqala kwindawo yakho yokuqala, emva koko usebenzise umngxuma weposi, embe umngxunya osisiqingatha sesithuba kunye neesentimitha ezintandathu. Unokusebenzisa ukuphakama kweepaneli zelethi ukulungelelanisa ubude bezithuba. Ukuba ucwangcisa ukongeza iipopu zeposi zokuhombisa, kufuneka wabele ubuncinci ii-intshi ezili-12 zesithuba esicacileyo ngaphezulu kweepaneli zeletisi. Ubuncinane ⅓ zezithuba kufuneka ziye ezantsi komhlaba ukuqinisekisa isiseko esomeleleyo. Yomba umngxunya kwisibonda ngasinye ecaleni komgca wocingo lwakho. Phinda de ufike esiphelweni.
indlela yokuxelela iidayimani zokwenyani
• Galela iiyintshi eziyi-6 zegrabile okanye ilitye elityumkileyo kwimingxunya. Gcwalisa uze upakishe phantsi ngokuqinileyo.
• Beka isithuba kumngxuma ngamnye. Xa igrabile isendaweni, cwangcisa ngocoselelo iposti nganye kwimingxunya yabo.
• Baleka iintambo, ubeke iziteki kwindawo nganye emileyo ukuqinisekisa ukuba zimi nkqo. Sebenzisa inqanaba ukujonga ukuba zichanekile na. Qinisekisa ukuba zichanekile ngaphambi kokuba zibekwe kwindawo yazo esisigxina.
• Sebenzisa umphezulu wepaneli yelati njengesikhokelo sokujonga ukuphakama kwezithuba. Sika iipaneli ukuba uhlengahlengiso luyafuneka kodwa njengoko bekutshiwo ngaphambili, ukuba imilinganiselo ithathwa ngononophelo kwaye iqatshelwe ngexesha lokulungiswa kwezinto, oko ngekhe kube yingxaki. Kwakhona, lungelelanisa ulungelelwaniso kwakhona xa kufuneka.
Isabelo # 6
Ukwakha ucingo olubiyele ngasemva
• Xuba umxube wesamente ngokwemiyalelo yephakheji. Unokwenza oku ziibhetshi ezincinci ukuze zingazami ngokulula. Unokucela umboneleli wakho ngohlobo lokuseta olukhawulezayo olugalelwa ngokuthe ngqo kwingxowa, lome kwaye ngaphandle kokuxubeka, emva koko lumanzi ngamanzi. Olu hlobo lwekhonkrithi luya kukugcinela umzamo kunye nexesha njengoko lisusa isidingo sokudibanisa kwaye linciphise ixesha lokunyanga ubusuku bonke.
• Yongeza umxube owomileyo wekhonkrithi emingxunyeni. Gcwalisa ngokupheleleyo kwaye uvumele ukuba zome iiyure ezingama-24 ukuya kuma-48. Ngokukhawuleza ukuba isamente inyange ngokupheleleyo, susa iwele kunye nezibonda.
• Iileta zokufaka kwizithuba. Phawula indawo kwizithuba apho ufuna ukujija iiphaneli zelethi. Oku kufuneka kube kwicala lezithuba ezijonge ngaphakathi ngaphakathi kweyadi yakho. Imingxunya yangaphambi kokugrumba kula manqaku, emva koko uncamathisele iiphaneli zelethi usebenzisa isixhobo sokugrumba sombane kunye nezikrufu. Qhubeka nenkqubo de ufike esiphelweni somgca wocingo. Jonga kabini ukuba yonke into ithe tye ngokusetyenziswa kwenqanaba.
• Yongeza izinto zokugqibela. Faka ipeyinti okanye ugqume ngengubo yokhuni. Unokushiya ucingo lwe-lattice lungagqitywanga ukuba ukhetha ukujonga kwendalo kweenkuni. Cwangcisa izihlomelo zeposi zokuhombisa okanye uhombise ngokokhetho lwakho.
Isabelo # 7
Kucingo olubiyele lwePaneli yeLatt eneMood Lighting
Nika ugxininiso kubuhle beengcingo ezenziwe ngokhuni ngokusetyenziswa kwezibane ezifudumeleyo ezimhlophe. Nawuphi na umva wegadi okanye igadi ngokuqinisekileyo iya kujongeka icolile ngakumbi ngokongeza ukukhanya.
Iingcamango zokubiya zeLattice
# 1 Ucingo lomsedare kunye nesango ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
#Mbini ucingo lwe-lat francisco ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
# 3 TristanFerne ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
# 4 pb3131 ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
# 5 TimFuller ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
# 6 TimFuller ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
# 7 TimFuller ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
Ndwendwela igalari yethu yemifanekiso ye Izimvo zocingo lwegadi ngeendlela ezingakumbi zokuphucula umva kwendlu yakho.
Eyona ndlela ibalaseleyo yokubopha iqhina
izipho zangoku zomtshato ngonyaka
iilokhwe ezimfutshane zegolide zomtshato
Eyona ndawo yokugcina iiringi kwi-intanethi